Ngwa ahụike 5 na-eduga ndụ dị mma | Gam akporosis
Ngwa ahụike 5 na-eduga ndụ ndụ dị mma
Manọgide na-ebi ndụ dị mma bụ otu ihe na-amasị anyị ma na-echegbu ọtụtụ ndị ọrụ yana nke ukwuu. Usoro dị mfe: nri dị mma yana mgbatị ahụ Agbanyeghị, atụmatụ a chọrọ ihe nke atọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe dị mkpa karịa nke gara aga maka ọtụtụ mmadụ: ike.
N'ụzọ dị mma, ụwa nke ngwa mkpanaka hụrụ na ahụike dị mma iji zụlite, taa anyị nwere ọtụtụ ngwa nke na-enye anyị ohere ịdebe ihe anyị na-eri, ole anyị na-akwagharị, nri ndị na-edozi ahụ, calorie ọkụ na usoro niile a nke ekele nke anyị nwere ike ịmara ma ọ bụrụ na anyị na-eme ihe nke ọma, ma ọ bụ na anyị ga-edozi ihe. Na mgbakwunye, ọnwụnwa ahụ ghọrọ omume na nke a, pụrụ iche na mmezu nke ihe ndị a rụzuru, na-agba gị ume ka ị gaa n'ihu. N'ihi nke a taa m na-ewetara gị a nhọrọ na ụfọdụ ngwa ahụike kachasị mma maka gam akporo. Amaara m na ha niile abụghị, mana anyị ga-enwe obi ụtọ ma ọ bụrụ na ị hapụụrụ anyị aro gị na nkọwa. Anyi ka anyi bido?
1 Ndụ: Healthy Living App
2 Onye na-azụ m Dasi
3 Google dabara adaba
5 Runtastic: Na-agba ọsọ
Ndụ: Healthy Living App
N'uche nke m Lifesum Ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, otu n'ime ngwa ahụike kachasị mma na nke zuru oke. Gwakọta akụkụ nke nri na mmega ahụ. Ihe kachasị mma bụ na ọ naghị amanye gị ka ịchekwa nri siri ike, kama ọ na-enye gị ụkpụrụ nduzi ị ga-agbaso. Site na itinye ihe ị na-eri, ị ga - ama ma ị na - eme ya nke ọma, ị ga - amakwa ebe ị ga - emezi. Otu ihe ahụ na-eme na mgbatị ahụ. Na mgbakwunye, kwa ụbọchị ị ga-ahụ ngụkọta ngụkọta nke ọganihu gị.
Ọ bụ ngwa ahụ emebere ya dabere na data dika ibu gi, ogo gi, okike gi… Lifesum bụ ngwa eji akwụ ụgwọ iji chọpụta usoro nri gị na mmega ahụ, yana ụfọdụ mmekọrịta mmekọrịta. Ihe ọ bụla ọzọ chọrọ ndenye aha. Maka ọrụ ndị ọzọ niile, dịka ịnweta nri ndị ọzọ, usoro nri na ihe ndị ọzọ, ọ chọrọ ndenye aha akwụ ụgwọ.
Onye na-azụ m Dasi
Ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ yiri nke ahụ na Lifesum, ma ọ bụ n'efu. Tinye afọ gị, ogo gị na ịdị arọ gị, na ngwa ga-akwado iri nri na mmega ahụ. Ihu ọma nke a bụ ihe a na ngwa na-eme, Otú ọ dị, ọ bụ ezigbo ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ị na-achọ otú, ọ bụrụ na ị na-achọ ihe bụ isi, ebe a na ị nwere ya.
Google dabara adaba
Anyị enweghị ike ịhapụ ngwa ahụ n'onwe ya Google Fit nke i nwere ike iji mee ya soro mmega ahụ gị niileMa ọ na-agba ọsọ, ịgba ígwè, ma ọ bụ naanị ịga ije. You nwere ike isetịpụ ihe mgbaru ọsọ dịka ọnụọgụ nke usoro, calorie ịchọrọ ọkụ, wdg. Na ngwa ọ ga-egosi gị data ozugbo (ọsọ ọsọ, ijeụkwụ, ụzọ, mbugo na ọtụtụ ndị ọzọ).
N'elu, na-ejikọtaghị ngwa ngwa na tọn nke ngwa site na ndị ọzọ dịka Lifesum, MyFitnessPal, Strava, Runkeeper, Nike +, Mi Fit… Ma ọ bụ kpam kpam n'efu.
Google Fit: Ọrụ ndekọ
MyFitnessPal bụ otu n'ime ngwa ahụike kachasị ama ama ị ga-ahụ na Playlọ Ahịa gam akporo gam akporo yana ọ bụ na iji ike, ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka enyemaka iji felata ma jigide nri kwesịrị ekwesị. Will ga-enwe ike idobe usoro niile nke ihe niile ị na-eri, ọ na-ejikọ ọnụ na ọtụtụ ngwa ndị ọzọ metụtara ahụike na ahụike. O nwekwara akụkụ mmega ahụ, ọnụ ọgụgụ banyere ọganihu gị na ndị ọzọ. Ihe na-adịghị mma bụ na ụdị nnwere onwe anaghị akwụ ụgwọ karịa ka calorie agụta, ị ga-achọ ndenye aha maka ndị ọzọ. Ma ọ bụrụ na ị dị ezigbo njọ ...
Developer: MyFitness Laraba, Inc.
Runtastic: Na-agba ọsọ
Ninggba ọsọ aghọọla ejiji na Okeke Na Rungba ọsọ ya, ọ bụ otu n'ime ngwa ahụike kachasị ewu ewu iji debe usoro ịgba ọsọ gị. Gụnyere ọnụọgụ, eserese, mmega ahụ, na ndị ọzọ. Nwere ike ịdebe akpụkpọ ụkwụ gị iji mara mgbe oge ruru iji dochie ha. Ọnụahịa ya, na ndenye aha ya, dịtụ ala karịa ndị asọmpi ndị ọzọ na-adịghị arụ ọrụ ọfụma, ọ na-ejikọtakwa na ngwa ndị ọzọ dịka Google Fit na MyFitnessPal, nke na-eme ezigbo ngwakọta.
adidas Ikeduru by Runtastic
Developer: Adidas NMD RXNUMX BDXNUMX
Dị ka anyị kwurula na mbido, ndị a bụ naanị nhọrọ nke anyị nwekwara ike ịgụnye ngwa ahụike ndị ọzọ dịka Nike +, S Health, Yoga Studio, Fooducate, MyPlate Calorie Tracker, na ndị ọzọ, mana kedụ ndị ị depụtara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa ahụike 5 na-eduga ndụ ndụ dị mma
Ngwa 5 iji tụgharịa uche n'oge akwa Ọktọba
Akụkọ mgbe emelitere Telegram ikpeazụ